Waa mid ka mid ah fikradaha ugu wanaagsan si loo hubiyo in qashinka la madhin dib u dhac kasta oo aan si loo hubiyo in load nidaamka la wadaago habka ugu fiican. By sidaas samaynaya user a markaas awood u yeelan doonaan in ay helaan ugu fiican iyo habka ugu fiican laakiin waxaa jira khasaare ah oo waa mid ku habboon dhammaan dadka isticmaala kuwa aan faaruqinta qashinka ay eegayaan files iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la xuso in user ah waa in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka processing tahay ee qashinka waa mid ka mid ah oo la sameeyo iyadoo la kaashanayo guud soocidda file sida ay u ogolaan doonto in user si loo hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa oo ka dhigi files muhiim ah in dhaqaaqay in qashinka si qalad ah ee la soo dhaafay waxaa la soo celiyo oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Si aad u hesho ugu wanaagsan ee reer fikradda ah waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in tutorial ah in loo qoray arrintan la xiriira buuxda loo raacay. Tani waxay sidoo kale hubin doona in user helo natiijada waafaqsan shuruudaha iyo sida ugu fiican ee la soo gudbiyey in nidaamka iyo sidoo. Si aad u hesho tutorial si toos ah Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in user helo aasaasiga ah iyo aqoonta asaasiga ah oo uu soo halkan ku xusan gudahood.
Maxay tahay in la qabto ka hor inta faaruqinta qashinka ku Mac
Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah qashinka tahay nadiifinta waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in faylasha in ay jiraan gudahood qashinka si sax ah waa la baadhay, oo dhan files muhiim ah bixiyay. Ka hor inta qashinka la madhin waxa ay sidoo kale waxaa lagula taliyey in la hubiyo in faylasha oo ku yaal nidaamka la arkaa in ay muhiim ah in nooca ayaa sidoo kale la baadhay, oo waa in lagu hubiyo in dhammaan faylasha kuwani waa meel si dib markii qashinka ma jiro waa la waayayaa oo ka mid ah waa la tirtiray kac ahayn.
Waxa kale oo hubin doona in user marnaba ayaa si aad u hesho arrinta ay hubiyaan in barnaamijyada caynkan oo waxaa la helay in la hubiyo in qashinka madhan la baaray xogta ah in la khasaaray ka dhigi lahaa iyo marka la helay ka dibna waxaa la xoojiyaa . Si looga fogaado dhib oo dhan waxa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user helo dhaqanka ugu fiican codsatay ie si taxadar leh u arki files ka hor bin qashinka waxaa loo madhiyo.
Sidee qasi lahaa qashinka madhan
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay in la siiyaa oo ay ku Wondershare Data Recovery u Mac. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in tayada la gundhig gudahood barnaamijka ayaa sidoo kale loo isticmaaley si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo. Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in barnaamijka software-ka loo isticmaalaa in fiirisaa jihada ay tahay in ay bixiyeen ku dhiirigelinayaan in uu u gal website-ka rasmiga ah ee Wondershare ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo si habka soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijkan ka dibna user waa in Beenabuurte arrimaha la xidhiidha khasaaraha xogta iyo soo kabashada. Wondershare Data Recovery for Mac Ayaa hubin doona in dhammaan arrimahan soo celiyay oo waxaa loo xaliyay iyada oo wax kasta oo arrinta iyo dhibaato si user la cafiyo, oo waxay qaadan kartaa daryeelka arrimaha la xidhiidha this ifafaale in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah.
Taageerayaan noocyada file marka ay timaado barnaamijkan waa sida soo socota si ay u hubiyaan in user helo ogyahay oo ku saabsan xaaladda in la xiriira barnaamijka in marka yihiin shuruudaha ugu fiican oo nooc faylka si loo bilaabo barnaamijka habka ugu fiican:
Geedi socodka uu soo xiriira barnaamijka waa sida soo socota iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in geeddi-socodka waxa la socotay Screenshot si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ee:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi, rakiban oo ay maamulaan,
2. Ka dib markii gujinaya ee doorasho laga badiyay kabashada file user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in drive, taas oo qashinka ku yaal waxaa lagu soo xulay oo user ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in badhanka scan la isku soo riixayo in wareemo dhibic raadinta iyo ka dibna si ay u sameeyaan in ay Sidaas oo ugu wanaagsan:
3. files in la helay waa kuwa ka lumay iyo user wuxuu hubinayaa in in files kuwaas oo si fiican yihiin baadhay iyo kuwa loo baahan yahay waa la soo kabsaday si aad u dhamayso ee buuxa.
Maxaa la ogaaday ka hor soo kabashada xogta?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in faylasha muhiim ah oo fayl waxaa lagu sugayay oo haddii mid ka mid ah ayaa markaas ka maqan waxaa muhiim ah in la ogaado in user waa in ay maamulaan barnaamijka software kabashada macluumaadka si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u nidaamka iyo user sidoo kale helo heshiis ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Maxaa la ogaaday ka dib markii kabashada xogta?
Jawaabta su'aashani waa mid aad u fudud oo user waa in la hubiyo in faylasha iyo fayl ku soo celiyay ayaa ku jirta kaalinta sameeyo oo marka la helay raad raac loo abuuray dib u dhac kasta oo aan si loo badbaadiyo is ka kaaftoomi doono mustaqbalka iyo dabeecadda ah samaynta gurmad ah Markaas joogto ah.
Su'aasha 1aad -
Intee jeer aad faaruqiso qashinka ku Mac?
Su'aasha 2aad -
Ma laga badiyay files muhiim ah sababta oo ah in?
> Resource > Mac > Sidee qasi lahaa qashinka madhan on Mac si loo badbaadiyo macluumaadka aad